01 Feb, 2019 - 00:02	 2019-01-31T13:35:54+00:00 2019-02-01T00:03:03+00:00 0 Views
MAKADII? Ndiri kutsvagawo mudzimai wekufambidzana naye murudo ane makore 35 zvichikwira. Ngaave akasimba, mutsvuku anogara muHarare, asiri pamushonga. Ndobatika pa0719 577 004.
Ndiri murume ane makore 40 nevana 3. Ndiri HIV+ asi handirakidze, handishande ndoita mabasa emaoko. Ndoda mukadzi ane mazirudo, ndoenda kumasowe uye handidi asiri kuda zvemusha. Nhare yangu 0774 972 620.
Makadini? Ndiri musikana ane makore 32 asina kumboita mhuri uye ndinotsvagawo mukomana anoda zvekuroora. Handidi anonwa kana kuputa kana ane mhuri. Ndoda anoziva Mwari. Nhare yangu 0737 811 684.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35 ndotsvaga mukadzi ari serious nemarriage. Ndine mwana mumwe, nhare yangu 0773 684 275.
VeKwayedza makasimba here? Ndiri mukomana ane makore 26, ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 20. Ndogara kwaMutare, nhamba yangu 0775 318 529.
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 38 nevana 2, ndinogara kuRuwa uye ndiri HIV positive. Ndoda mudzimai ane makore 40 – 45. Nhare yangu 0785 890 835.
Makadii? Ndiri murume ane makore 32 ndodawo mukadzi anodawo zvemba. Ndoita basa remaoko, andifarirawo ngaandibate pa0784 603 027.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinoda musikana ane makore 22 zvichidzika ave kuda zvemba. Ngaave ari pachokwadi asiri pamushonga. Nhare yangu 0782 432 209.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 nevana vaviri. Ndinotsvakawo mudzimai wekuroora asi ngaave akavimbika pane zvose. Ndibatei pa0734 697 685.
Ndiri murume ane makore 52, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ari pamushonga seni. Andifarira ndibate pa0777 326 654.
Ini ndiri mukadzi ane makore 32, ndinotsvagawo murume ane makore 35 – 50 asi murume wemunhu kwete. Nhare yangu 0782 960 464.
Makadiiko? Ndiri mudzimai ane makore 30, ndinotsvaga murume ane makore 45 – 50 ari serious. Ndinobatika pa0783 829 252.
Ndinotsvaka mukadzi wekuroora, ndine makore 32 uye ndoda ane makore 30 zvichidzika ane mwana mumwe chete. Nhare yangu 0785 471 534.
Ini ndiri murume ane makore 39, ndinotsvakavo mudzimai wekushamwaridzana naye ane makore 28 kusvika 33 anomata. Nhamba dzangu 0782 025 922.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana akangwara anotambika naye. Ndiri kutsvagawo musikana (penpal) wekutamba naye. Ndonakidza manje, ndine makore 23, anoda ngaandibate pa0783 171 415.
Ndiri kudawo musikana ari HIV+, kunyanya kubva pakuzvarwa ane makore 20 – 25. Ini ndine makore 26. Ndinobatika pa0734 867 754.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, HIV negative uye ndinotsvaga mukadzi ari serious. Ngaave anoda zvemba, zvizhinji tozotaura. Andifarira ngaandibate pa0736 533 335.
Makadi veTishamwaridzane? Ndinokutendai ndakazowana anondida, takapinda muwanano. Pane vaye vaifona pa0776 796 307 chiregai zvenyu, ndakawana.
Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvagawo mukadzi ari serious nekuda imba ane makore 29 zvichidzika. Ngaave anonamata ane mwana 1 kana asina. Ini ndine mwana 1, asiri pamushonga andifarira ngaandibate pa0773 124 704.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai anoda zvekuvaka imba. Ari pachokwadi anofona totaura zvakawanda pa0733 156 395.
Makadini? Ndiri kutsvagawo mudzimai ane mwana 1 kana musikana wekuwadzana naye. Ngaave ari mutsvuku,murefu, akati simbei, anogeza, anoshanda, asiri pamushonga uye anogara muHarare ane makore 22 – 32. Nhare yangu 0715 096 970.
Ndodawo musikana ane makore 18 – 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34 uye ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba yangu 0718 502 810 asi vaera Moyo kwete.
Makadii? Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvakawo mukadzi ane makore 24 – 28 achigara muHarare. Zvakawanda totaura pa0772 261 111.
Makadii? Ndiri murume ane makore 34 makore nemwana mumwe uye ndodawo mudzimai ane makore 21 kusvika 30 anewo vana vake. Nhamba dzangu 0771 328 836.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 uye ndiri pamushonga. Ndotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi, anoda nezvangu anondibata pa0778 273 186.
Makadii veKwayedza? Ndofara chaizvo mukashambazawo tsamba yangu, ndotsvagawo musikana kana ane mwana mumwe chete wekuroora ane makore 18 kusvika 23. Ndinoda ari pachokwadi, ndine mwana 1. Makore angu i25 uye ndinoshanda. Andida ndibate pa0771 435 984.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri. Ndiri pamushonga uye ndinoda murume ari pamushonga ane makore 45 kusvika 50. Ngaandibate pa0784 963 670.
Makadii vechirongwa? Ndiri murume ane makore 33 ndotsvagawo mukadzi wekugara naye. Ngaave ari pamushonga, andifarira anondibata pa0775 509 568.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 26, ndinotsvagawo mukadzi ave kuda zvemba. Nhare yangu 0772 567 661.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25. Ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 21 asiri pamushonga uye asina chirwere. Anodawo ngaandibate pa0785 663 407.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1. Ndinotsvaga murume ane makore 37 kusvika 42 ane vana 2 kana 3 anoshanda uye anoda zvemba chaizvo. Vanoda ndibatei pa0771 928 600.
Makadiiko? Ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana mumwe chete. Ndiri pamushonga uye ndinotsvakawo murume ane makore 32 kusvika 45. Andifarira ngaatumire sms pa0784 579 907.
Ndanyorera ndanyorerazve, ndishambadzewo veduwe. Ndiri murume ane makore 46, mugari wemuHarare. Ndoda mudzimai ave kuda zvewanano. Anoda ndibate pa0779 921 627.
Makadii veKwayedza? Ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe. Ndodawo mukadzi ane makore 19 kusvika 26 asina chirwere seni, ane mwana kana asina. Nhare yangu 0714 665 643.
Ini ndiri mukomana ane makore 24, ndinogara kuChimanimani uye ndinotsvagawo musikana wekuroora asiri pamushonga. Nhamba dzangu 0779 209 381.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 28 nemwana 1, HIV negative uye ndoda murume ari pachokwadi asina chirwere. Nhamba dzangu 0772 388 091.
Ndiri mukomana ane makore 32, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 26. Andida sms kana kufona pa0778 375 757.
Makandini veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvanga mudzimai ari pamushonga ari kuda murume asingaratidzi kurwara. Ngaandibate pa0717 542 606.
Makadii veKwayedza? Makaita basa ndakazomuwana wandaitsvaga saka vese vaifona pa0783 668 689 ngavachirega. Ndatenda.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 26, ndinotsvakawo murume wekufambidzana naye. Ndiri HIV positive nemwana 1. Andifarirawo ngaandibate pa0782 591 666.
Ndiri mudzimai ane makore 55 ndinodawo murume wekugarisanawo naye ari pachokwadi. Ndinoita basa remaoko uye ndiri cross-border. Nhamba dzangu 0716 325 630 asi ndoda ari muBuhera.
Ndiri murume ane makore 28, ndoda mukadzi ane makore 25 ari pachokwadi. Anondida anondibata pa0774 887 924.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ini ndakambonyorera ndikashaya wandakawirirana naye, ndiri murume ane makore 43 ane mwana mumwe chete andakawana ndichiri kuchikoro muna 2001. Ndinoshanda hangu kuZvishavane uye ndinotsvagawo mudzimai wekuroora nokuvaka naye musha ane makore 25 – 30. Ndinoda anopinda chero kereke ipi zvayo asina mwana kana mumwe chete. Ndinoda anoshanda kuZRP kaa ZPC kana asingashande zvake asi akavimbika. Ngaave achibva kunharaunda dzinoti Shurugwi, Mberengwa, Kwekwe, Gokwe. Ari serious ngaandibate paApp 0713 578 268.